Wadamada Jaamacadda Carabta oo isku raacay in ay sameeyaan Ciidan wadajir ah – Radio Muqdisho
Shir weynaha 26 aad ee ururka Jaamacadda Carabta oo maanta lagu soo geba gebeeyay magaalada Sharmal sheikh ee dalka Masar ayaa laga soo saaray warmurtiyeed kaas oo qodobadiisu ay kamid tahay in dalalka Jaamacadda Carabta ay yeeshaan Ciidan gaar ah oo wajaha khataraha ka imaanaya dalalka Yeman iyo Liibiya.
Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Nabiil Al-Carabi oo warmurtiyeedka shirka laga soo saaray akhriyay ayaa sheegay in shirka lagu taageeray weererka lagu hayo kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yeman isla markaana loogu baaqay kooxdaasi in ay isga baxaan goobaha ay gacanta ku dhigeen.
Shirkan oo labo maalin ka socday magaalada loo dalxiistago ee Sharmal Sheekh ayaa waxaa ka qeybgalay 12 hogaamiye oo kamid ah 22 wadanka ee ururka Jaamacadda Carabta ku jira inkastoo dalka Syria si KMG ah loogu joojiyay xubinimadeeda, waxaana madaxweynahiyaasha shirkaasi ka joogay kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay shirkaasi.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa la aas aasay 22 ka Maarso sanadkii 1945 waxaana xiligaasi ay ka koobnaayeen 6 wadan oo kala ah Masar, Ciraaq, Lubnaan, Sacuudi Carabiya,Suuriya iyo Urdun (Jordan) waxaana mudo yar ka dib ku soo biiray Yemanta waqooyin.
Xarunta ururka Jaamacadda Carabta ayaa ku taala magaalada Qaahira ee dalka Masar, u jeedad ururka ayaa aheyd in ay iska kaashadaan arrimaha Dhaqaalaha, Siyaasadda,Dhaqanka iyo danaha dhanka Diinta ah maadaama dhamaan dowladaha ururka ku jira ay yihiin kuwo Muslim ah.
Dhinaca kale xaaladda dalka Yeman oo kamid aheyd ajendiyaasha ugu horeeyay shirkan looga arinsanayay ayaa lagu soo waramayaa in Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay sheegtay in dhamaan isgaarsiinta iyo difaaca cirka oo ay Xuutiyiinta lahaayeen la burburiyay.
10 wadan oo Sacuudiga uu hogaaminaayo ayaa weeraro xagga cirka ah ku haya falaagada Shiicada ah ee Xuutiyiinta dalka Yeman.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Yeman Riyaad Yaasiin ayaa sheegay in dhowaan dalka ay soo gali doonaan ciidamo ka socoda dalalka taageera dowladda Yeman, isagoo tilmaamay in ciidankaas la keeni doono magaalada Cadan oo hadda xarun u ah dowladda Madaxweyne Cabdu Rabi Mansuur Haadi.
Mr Yaasiin ayaa intaa ku daray in ciidanka ugu horeeya ee dalka Yeman soo gali doona uu ka imaanayo Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Wararka Yeman ka imaanaya ayaa sheegay maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa ku sii siqayaan magaalada Cadan ee ku taala Koonfur dalka yeman,waxaana la soo sheegayaa in Markab dagaal oo laga leeyahay dalka Shiinaha uu maanta ku soo xirtay Dekadda Cadan kaas oo halkaasi sida la sheegay ka qaaday diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha Shiinaha u dhashay oo magaalada Cadan joogay.
Sidoo kale waxaa magaalada Cadan horey looga daadgureeyay dhamaan diblomaasiyiinta ajanabiga ah joogay halkaasi.
Wasaaradda Arrimaha gudaha oo sheegtay in beri ay ku egtahay qabashada araajida gudiyada Doorashooyinka iyo Xuduudaha
Madaxweyne Xasan Sheekh Iyo Wafdi uu hoggaaminayay oo dib ugu soo laabtay Dalka "SAWIRRO"